प्रोटिनको लागि टुसा उमारिएको गेडागुडी खानुहोस्
टुसा उमारेको गेडागुडीका धेरै फाइदाहरु छन्। सबैभन्दा पहिले गेडागुडी टुसाउनका लागि पानीमा भिजाउनुपर्छ। यसका लागि करीब २४ घण्टा गेडागुडीलाई पानीमा भिजाउनुपर्छ। १२–१२ घण्टामा पखालेर पानी परिवर्तन गर्नुपर्छ।
यो दिशातर्फ फर्केर खाना खानुपर्छः वास्तुशास्त्र
एजेन्सी । वास्तुशास्त्रमा दिशाको विशेष महत्व छ। कुन दिशामा के गर्ने र के नगर्ने ? कुनलाई राख्नु पर्ने, कुनलाई राख्नु हुँदैन ? कुन दिशामा यात्रा गर्नुपर्छ, कुन दिशामा जानु हुँदैन ? यी सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा लेखिएका छन्। वास्तु शास्त्रको महत्व थाहा पाउनेहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ किन सबै कुरा वास्तु अनुसार गर्नु आवश्यक छ।
घरको यो दिशामा शौचलय बनाउनु हुँदैनः वास्तुशास्त्र
एजेन्सी । वास्तुशास्त्रमा उत्तरपश्चिम दिशामा शौचालय निर्माणको कुराबारे बताइएको छ । वास्तुशास्त्र अनुसार उत्तरपश्चिम दिशामा शौचालय बनाउनु हुँदैन, तर केही सावधानी अपनाएर यस दिशामा शौचालय वा खाडल बनाउन सकिन्छ।
गुप्ताङ्ग गन्हाएर हैरान हुनुहुन्छ ? घरेलु समाधानका उपाय यी हुन्
महोत्तरी । मधेस प्रदेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा आज (शुक्रबार) ‘जुडशीतल’ पर्व मनाइँदै छ । प्राचीन मिथिलामा मनाइने यो पर्व मधेसका जिल्लाका अतिरिक्त मित्रराष्ट्र भारतका मधुवनी, झञ्झारपुर, सीतामढी र शिवहरसहितका जिल्लामा पनि प्रचलनमा छ ।
काठमाडौं । चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्रको सम्झनामा मनाइने ‘रामनवमी’ पर्व आज देशभरि श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ ।
वास्तुशास्त्र: घरको दक्षिण दिशामा नराख्नुहोस् यी ६ चीजहरु
एजेन्सी । घर बनाउँदा वास्तुशास्त्रको धेरै ख्याल गरिन्छ। वास्तु अनुसार घर बनाएर नियम पालना गर्नाले घरमा सुख शान्ति कायम रहन्छ ।
वास्तुशास्त्रः देवतालाई घिउ वा तेलको दियो बाल्ने ? आज आफ्नै भ्रम हटाउनुहोस्
एजेन्सी । वास्तुशास्त्रमा दीपबारे चर्चा गरिएको छ । बत्ती कहाँ र केका लागि राख्नुपर्छ ? दियो घिउको होस् या तिलको तेलको हुनुपर्छ ।
हिड्नुका फाइदा यस्ता छन्
एजेन्सी । दैनिक ३० मिनेट हिड्ने गर्दा बोनको घनत्वलाई बढाउँछ र खुट्टामा हुने हाडको समस्यालाई कमी ल्याउँछ । यसले स्पाइनल कर्ड, खुट्टा र हिपलाई समेत फाइदा गर्छ ।